Madaxweynaha oo furay tartanka ciyaaraha gobollada dalka+Sawirro – Radio Muqdisho
Madaxweynaha oo furay tartanka ciyaaraha gobollada dalka+Sawirro
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah u furay tartanka ciyaaraha gobollada dalka iyadoo munaasabaddi furitaanka ay goob joog ka ahaayeen Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Soomaaliya Maxamed C/laahi Nuux , Gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale iyo Mas’uuliyiin ka tirsan Labada Gole ee dowladda.
Xulka ciyaartooyda gobolka Banaadir ayaa guul ku daah furtay tartanka gobollada Soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho kaasoo ay ka qeyb qaadanayaan 6 gobol oo hoos yimaadda maamul goboleedyada dalka ka jira.
Kullanki ugu horreeyay ayaa galabta dhexmaray gobolka Banaadir iyo Koonfur Galbeed, waxaana qeybtii hore lagu kala nastay 3-0 oo ay Banaadir ku hoggaaminaysay, waxaana goolasha u dhaliyay Cabdullahi Suarez oo ka tirsan kooxda heerka labaad ee FC Banaadir, halka goolka labaad uu dhaliyay Liibaan Xasan oo u ciyaaray degmada Hilliwaa ciyaarihii degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana goolka saddexaad ansixyay kabtanka kooxda Bariga Dhexe ee Axmed Cabdiqaadir Buush.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta ayaa ciyaartooyda gobolka Banaadir waxa ay heleen labo gool oo kale, waxaana u dhaliyay Maxamed Ramirez oo ka tirsan kooxda FC Banaadir iyo ciyaaryahanka loo yaqaano Buush oo markale shabaqa soo taabtsiiyay kubbadda.
Ciyaarta ayaa ugu dambeyn ku soo dhamaatay 5-0 oo ay guusha ku qaadadeen ciyaaryahannada gobolka Banaadir.
Kulanka berri dhicidoona waxaa wada ciyaari doono Hiiran iyo Sh/Dhexe oo hal koox matalaya waxaa ayna wajihi doonaan xulka maamulka Jubbaland.
Wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee SONNA oo xafiis ka furatay Baydhabo
Madaxweynaha J. F. S. oo si kulul u cambaareeyay weerarkii ka dhacay dalka Faransiiska